10-ka goobood ee ugu fiican lulataaye bilaashka ah, waa maxay goobta ugu wanaagsan ee lulataaye? | Wararka Gadget
Goobta Ugu Fiican
Paul Aparicio | | Wasmo iyo wasmo
Haye Psst, Psst! Hadaad. Waan ku helnay. Waan ognahay inaad daawato porno badanaa. Ha welwelin, annaguba waan qabannaa oo waxaan ka shakisanahay inuu jiro hal akhriste oo, haddii uu xakameeyo isticmaalka internetka wax yar, hubin kara inuusan weligiis u isticmaalin inuu ku daawado fiidiyoow ay dadku farxad siinayaan jirka (Macarena) , Ay!). Waxay u badan tahay inay tahay inaadan aqoon goobta ugu fiican lulataaye meesha aad ka arki karto tayada porno gabi ahaanba waa bilaash, waana halka uu maqaalkani macnaha ugu badan ka samaynayo.
Qoraalkan waxaan ku soo bandhigi doonnaa 10 boggaga internetka ee ugu fiican galmada adigoon wax lacag ah ka bixin qalab kasta.
1 10-ka goobood ee ugu wanaagsan ee lulataaye lacag la’aan ah
2.5 Gabdhaha kaamil ah
3 Talooyin ku saabsan daawashada filimada galmada ee guriga
4 Xiddigaha la taliyay
4.3 Tori Madoow
4.7 Melanie Rivers
4.9 Xidigaha Bobbi
10-ka goobood ee ugu wanaagsan ee lulataaye lacag la’aan ah
In kasta oo goobaha lulataaye ay ku jiraan amar, tani way kala duwanaan kartaa Liiska waxaan ku soo daray 10 bog oo ah uma baahna Flash Player, taas oo noo oggolaan doonta inaan ka aragno iyaga oo ka socda biraawsar internet iyo xitaa aaladaha mobilada. Hoos waxaad kaheleysaa liiska oo dhameystiran, waxaan rajeyneynaa kadib markaad daawato inaad noosheegidoonto goobta kuugu fiican ee lulataaye. Hadana haddii aad haysatid mobilada gacanta lagu qaato ee 'Android', waxaad sidoo kale isku dayi kartaa codsiga Waqtiga Porn-ka si aad toos ugu daawato fiidiyowyada mobilkaaga ama kaniinigaaga.
Kuuma yeelinno inaad sii sugto, kuwan waa websaydhada ugu fiican ee lagu raaxeysto waxyaabaha qaangaarka ah.
Liiska waxaan ku bilownay Nudevista. Sababtoo ah kama fiicna mana xuma bogag kale oo badan, laakiin maxaa yeelay waa mid nooc raadsade. Caqli ahaan, waad ka horumarin kartaa bogagga bogga, laakiin xoogga Nudevista ayaa ah inaan galno raadinta websaydhkuna mas'uul ka yahay raadinta bogagga ugu fiican wixii aan weydiisanno.
Way cadahay in ku dhowaad goob kasta oo lulataaye ay leedahay mashiin raadin u gaar ah laakiin, macquul ahaan, waxay baari doontaa oo keliya waxyaabaha ay ka kooban tahay. Haddii aan raadino "da 'yar" porn.com, waxaan arki doonnaa oo keliya waxa porn.com ay la xiriirto raadintaas. Si kastaba ha noqotee, haddii aan ku baarno Nudevista waxaan natiijooyin ka heli doonnaa porn.com iyo bogag kale oo badan.
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin bog leh keyd weyn oo ka mid ah xiddigaha lulataaye, 4tube ayaa ku xiiseyn kara. Marka lagu daro qaybaha iyo raadinta, 4tube waxaan haynaa Qaybta 'Pornstars', Halkaas oo aan ku arki doonno liistada kuwa ugu qiimaha badan, in kasta oo aan sidoo kale ku amri karno siday u kala horreeyaan. Isla shabakada waxaan ku leenahay suurtagalnimada inaan ogaanno akoonnada Twitter-ka ee gabdhahan quruxda badan, haddii aan rabno inaan ku raacno iyaga shabakadda caanka ku ah microblogging Waxyaabaha kor ku xusan oo dhan, waxaan dooran karnaa (marka la heli karo) tayada aan ku daawan karno fiidiyowyada. Ma jiraa qof wax intaa ka badan bixiya?
Miyaad u maleysay hab fudud oo aad ku heli karto galmo ka badan intii URL-ka ereyga lagu gelin lahaa Ingiriis oo aad la socoto .com? Hagaag way jirtaa. Oo kor ku xusan waa wanaagsan tahay. Marka lagu daro fiidiyowyada cusub ee maalinlaha ah, waxay leedahay qaybo badan, haddii aan dooneyno inaan galno raadintayada. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay nooc Isbaanish ah, haddii aadan si fiican u fahmin Ingiriisiga oo aad rabto inaad ogaato waxaad aqrinayso. Dabcan, fiidiyowyadu waxay ku jiraan luqadda asalka ah, taas oo badanaa ku qoran Ingiriis.
Pornhub wuxuu doonayaa inuu noqdo midka Netflix ee porno waana taas sababta loogu tiriyey inay tahay bogga ugu wanaagsan ee lulataaye adeegsadayaal badan.
Waxay bixisaa ikhtiyaarka ah bixinta $ 9,99 bishiiba iyada oo aanad lahayn xayeysiin iyo inaad awoodo inaad daawato fiidiyowyada HD, laakiin waa wax aanan hubin inay u shaqeyn doonto iyaga. Aynu runta u hadalno, markaan wax ka daawanayno Netflix iyo adeegyada kale ee filimada ee qulqulaya, waqtiga ugu yar ee aan ku jirno khadka tooska ah waa hal dhacdo oo taxane ah, laakiin waxaan sidoo kale daawannaa filimo dhererkoodu yahay saacad iyo bar. Pornhub ahaan waxaan noqon doonnaa, waxay kuxirantahay, laakiin xaalado badan ... waqti kayar marka loo eego dhacdo taxane kastaa socdo 😉
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxay yiraahdeen, Pornhub waa mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee lulataaye iyada oo mudnaanteeda leh. Sida bog kasta oo wanaagsan oo noocan ah, waxay leedahay qaybo badan, ikhtiyaar ku qoran Isbaanishka iyo keyd weyn oo aan ka heli doonno wax kasta, wax kastoo aan door bidno. Sidoo kale, uma baahna Flash Player, wax aan muhiim u arko.
Sida loo xanibo goobaha lulataaye adigoon rakibin wax app ah
Waxaan xasuustaa faallo ka timid qof aan is naqaanno oo igu tidhi «Y ayaan ku dhejiyay Google waxayna ka dhigeysaa Youjizz ka hor YouTube. Rag wax«. Kuma raacsani kan dambe, laakiin tan hore ayaa qayb ahaan, la fahmi karaa. Youjizz waxay leedahay xog ururin ballaaran oo kumanaan bog ah, laakiin waxay ka kooban tahay qaybo ka yar goobaha kale ee lulataaye (iyagu waa kuwa ugu hooseeya).
Waxay sidoo kale shaqeysaa iyada oo aan laheyn Flash Player laakiin, si ka duwan bogagga aan soo sheegnay, waxay ku fureysaa fiidiyowyada daaqad cusub bog furayaasha qaarkood oo leh ciyaaryahan la jaan qaada HTML5.
Sida goob kasta oo lulataaye wanaagsan oo qiimihiisu yahay milixdeeda, Tube8 sidoo kale waxay leedahay xog ururin ballaaran oo sidoo kale waxaa lagu heli karaa Isbaanish. Meesha ay waxoogaa ka yareynayso waxay ku jirtaa tirada qaybaha, markaa haddii aanaan dan ka lahayn waxa aan ku aragno bogga ugu weyn, waa inaan ku sameynnaa baaritaannada gacanta (xD) maskaxda.
«Just porn, ma jiraan wax aan jirin ". Hal-ku-dhiggan waxaan ku leenahay bog kale oo wanaagsan oo jilicsan oo leh waxyaabaha qaangaarka ah Waxay leedahay liis ballaaran oo qaybaha la heli karo oo xitaa waxay leedahay HD qeybta video, dhammaantood lacag la’aan. Dhinaca kale, waxay kaloo leedahay a nooca shabakadda bulshada taas oo aad uga faaloon karto fiidiyowyada sida YouTube-ka oo xitaa aad farriimo ugu diri karto isticmaaleyaasha kale oo aad saaxiibbo la yeelan karto
Pornotube waa mid ka mid ah bogaggaas oo si fudud loo xasuusto mahadsaniddiisa YouTube-ka. Waxay leedahay qaybo, in kastoo aysan badnayn, iyo qayb la arko fiidiyowyo dalab ah (VOD) kaas oo aan ku daawan karno filimo dhan markasta oo aan rabno. Haa, tan filimada ayaa bixinaya. Aynu nidhaahno xoogga Pornotube waa qayb ka mid ah «fiidiyowga fiidiyowga», maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad iibsato oo aad kireysato filimo qiimo la mid ah waxa aan ka iibsan karno filimada aan X ahayn ee dukaan kale. Kaalay, Pornotube waa waxa iTunes, Google Play ama PlayStation Store ka maqan.
Ka dib markii YouTube ay soo bandhigtay nooca lacag bixinta ee barnaamijkeeda fiidiyowga, isticmaaleyaal badan ayaa sameeyay kaftan la xiriira magaceeda. Google waxay u bixisay magaca "YouTube Red" waxaana jira degel internet ka ah oo loo yaqaan 'Porntube'. Way sii dhowaanaysaa, maahan?
Redtube waxay leedahay qaybo badan iyo sidoo kale qayb ka mid ah pornstars, inkasta oo aysan u fiicnayn sida 4tube. Waan awoodnaa rukumo kanaalladooda si aysan u dhaafin fiidiyow kasta oo cusub oo magaciisa lagu soo raro. Si la mid ah YouTube, kaalay.
Gabdhaha kaamil ah
Oo waxaan ku dhammeynaynaa degel kale oo loo tixgeliyo barta ugu wanaagsan ee lulataaye, in kasta oo markii hore ay u muuqato inaysan waxba gaar ah lahayn laakiin, sida magaceeda ka muuqata, waxaa jira "gabdho badan oo qumman". In Gabdhaha Perfect ay diiradda saaraan gabdhaha yaryar, inkasta oo aan had iyo jeer ahayn, oo leh qurux weyn. In kastoo, si macquul ah, haddii aan ka hadlayno degelkan ku yaal liistada boggaga lulataaye, haddana gabdhuhu keligood keligood ma aha, in kastoo sidoo kale.
Oo wanaagsan, kuwani waa soo jeedintayda websaydhka galmada. Xaqiiqdii waxaad haysataa qaar kala duwan qaar badan oo ka mid ahina aad bay u fiicnaan doonaan, shaki iigama jiro inay jiri karaan dad iga xirfad badan oo kani ku jira 😉 laakiin waxaan idiinka sheegay bogag aad u wanaagsan, oo waxyaabo badan oo kaladuwan ka kooban isla markaana ka shaqeeya xitaa qalabka mobilada, wax maanta muhiim ah.
Talooyin ku saabsan daawashada filimada galmada ee guriga
Hadda oo aad ogtahay taas oo ah goobta ugu fiican ee lulataaye (ama bogagga ugu fiican ee lulataaye haddii aad ku dhegto dhowr ka mid ah kor ku xusan), waxaan ku siin doonnaa dhowr talooyin oo aad ku daawan karto waxyaabaha qaangaarka ah ee guriga ku jira iyada oo aan la ugaarsan.
Haddii kumbuyuutarka la wadaago, waxaad u badan tahay inaadan rabin qofna inuu ogaado inaad booqatay boggaga galmada, sidaa darteed halkan waxaa ku yaal tilmaamo.
Waxa ugu fiican uguna fudud ee aan sameyn karno ayaa ah taariikhda cad ka dib markii uu daawaday porno. Tirtirida taariikhda waxaa loo sameyn doonaa hal qaab ama mid kale iyadoo kuxiran biraawsarka aan isticmaalno. Tusaale ahaan, Safari waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan tagno menu-yada Safari oo aan dooranno "Clear history".
Hubso taas kuma xirna waxba. Tan waxaan uga jeedaa, tusaale ahaan, koonto Google, Firefox, iwm. Adeegyadan ayaa sidoo kale badbaadin kara booqashooyinka aan ku leenahay internetka, wax aan laga yaabo in aynaan xiiseynin.
Adeegso wareejin qarsoon. Si aan u ilawno, wax kale oo aan sameyn karno ayaa ah inaan bilowno daalacasho aan qarsoodi ahayn. Markaad isticmaaleyso biraawsarka qaab qarsoodi ah, waxba laguma keydin doono taariikhdeena, aragti ahaan, raadintayada sidoo kale lama keydin doono.
Adeegso wakiil. Haddii aad tahay qof waalan oo waxyaalahaas oo dhan jira, waxaad had iyo jeer isticmaali kartaa wakiil si aad u qariso aqoonsigaaga. Hab wanaagsan oo tan lagu sameeyo ayaa ah in la isticmaalo kan Tor browser, maadaama ay horeyba u sameysay si iska caadi ah. Dabcan, qaar ka mid ah astaamaheeda amni waa inay naafo noqdaan ama aan waxba arki doonin.
Xiddigaha la taliyay
Markuu arkay qaar ka mid ah kuwa ugu fiican shabakadaha galmada bilaash ah internetka, halkan waxaa ku yaal liistada qaar ka mid ah atariishooyinka adduunka ugu caansan.
Riley waxay sheegtay in aysan u dhalan inay noqoto "dad jilicsan", sidaa darteedna mararka qaar ay ku adkaato inay ficil sameyso. Taasi waxaa laga sheegay xaflad uu la joogay dhowr taageerayaal ah (ma ahayn, huh?), Laakiin yaa oran lahaa. Markii ay ka soo hormarto kaamirooyinka, 24-sano jirkaan wax dhib ah kuma lahan, lidkeed. Waxay u muuqataa inay iyadu jeceshahay oo ay had iyo jeer daaran tahay, taas oo caawinaysa shaqaalaheeda, dabcan.
Riley wuu guuleystay laba abaalmarin oo loogu talagalay "Xiddigta" ee sanadka, 2012 iyo 2013. Intaas waxaa sii dheer, sanadkii 2013 waxay ahayd loo magacaabay toddobo abaalmarin kala duwan Halkaas ayaan ku dhaafayaa.
Mia waxay ku jirtay kaliya porn-ka muddo 3 sano ah, laakiin mar hore ayay guuleysatay 5 abaalmarin oo ay u qaybiyeen qaybo kala duwan iyo shirkado. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waxay ahayd loo magacaabay 11 abaalmarino kale dheeraad ah, wax aan qofna heli karin. Quruxdan 23 jirka ahi waa mid kale oo u muuqata in mar haddii aannu shidno firuska, aysan jirin cid ka hor istaageysa, taas oo aan cidna ka cabanayn 😉
Michelle Chapman waxyar ayey ka weyn tahay labadii hore. Isaga oo jira 27 sano iyo 6 sano oo shaqo ah, wax u qabsoomay oo ka hooseeya ma jiro 18 abaalmarin filimada lulataaye, taasna ma tirinayso magacaabista ay heshay. Tori dhamaanteed waa qurux, xagasha iyo wajigeeda labadaba, hadaad rabto inaad ogaato sababta ay ugu guuleysatay abaalmarino badan, waa inaad ku aragtaa iyada oo ficil ah.
At 28, Nicole ayaa ahayd loo magacaabay seddex ka mid ah shaqadeeda. Wuxuu lahaa mid ka mid ah wejiyada aan aadka u jeclaa waana sababta aan ugu daro liiskan, in kasta oo, sida aan qabo, uu gabi ahaanba jidhkiisa baabi'iyay sannadihii u dambeeyay, isagoo kubbado qoorta hoostiisa gelinaya, isla markaana kordhinaya mugga bushimaha badan. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Nicole Aniston, shaki la'aan, waa shaqooyinkeeda ugu horreeya, kuleylka, quruxda iyo saamiga.
In kasta oo aysan u muuqanaynin wejigeeda xiisaha leh, Jessica McComber sidoo kale waa 28 sano jir laakiin, si ka duwan Nicole Aniston, iyadu waxba kamay taaban jirkeeda. Ama, waa hagaag, umay oggolaan dhakhtar qalliin inuu wax ku sameeyo jidhkeeda, maxaa yeelay taabashada nafteeda, in badan ayay is taabatay, iyada iyo dadka kale Abaalmarinno 14 ah wuxuuna leeyahay hypoxyphilia.
Sidoo kale loo yaqaan 'Angelica', tan 22 jir ruush ah waa inay hadlaan mustaqbalka. Waxay ku jirtay porn-ka illaa 4 sano, laakiin waxay umuuqataa inay qaadaneyso nolol dhan. Ma aysan guuleysan lamana magacaabin wax abaalmarin ah laakiin, hadii ay aniga ahaan laheyd aniga, waxaan horey uheli lahaa dhowr abaalmarin. Xaqiiqdii hadaad u fiirsato waad ila raaci doontaa.
Quruxda Laatiinka ah ee inaga timaad Colombia. Sara Vélez ma aqbasho shaqooyinka ay ka mid yihiin galmada dabada, wax ay atirishooyin yar ku dhiiradaan inay diidaan. Tan iyo muuqaalkeedii markii ay jirtay 18 sano, waxay isa saartay boos muhiim ah warshadaha lulataaye waana jirtay loo magacaabay 4 abaalmarin. Caqli ahaan, hadii aan ku soo daro liiskan maxaa yeelay waxaan siin lahaa abaalmarin iyo wax kale 😉
Qor magacan. Xaqiiqdiina waxay siin doontaa waxyaabo badan oo looga hadlo mustaqbalka. Waxay kujirtay porn-ka muddo gaaban, laakiin wejigeeda wajiga ah ayaa ku sii jiraya taas, wejigeeda. Wuxuu aad u jecel yahay bakooradda iyo, haddii ay la jiri karto qof midab leh oo xubin fiican leh, dhammaantood way fiicnaanayaan. Ka raadi fiidiyowgiisa bogagga hore waxaadna arki doontaa naftaada.
Bobbi Starr waa atariishada ugu da'da weyn liiskaan, 32 jir ah. Waan ku daray maxaa yeelay waxay umuuqataa taas, si ka duwan Melanie Rios, waxba ma diidaayo. Waxaa intaa dheer, wuxuu doorbidaa "gadaal dambe," marka wax kasta oo ay isaga ku sameyn karaan ayagoon ka cabanin. Waxay kaloo jeceshahay in 'si xun loola dhaqmo', taas oo khaas u ah 'rabshadaha'. Ka taxaddar, waa muhiim inaad aragto xigashooyinka. Cidna si xun uguma dhaqmayso galmada 😉 Sidoo kale waxay leedahay abaalmarino 13, run ahaan.
Liistada ku xigta waa Dillion Harper, qof leh qurux aad u qaas ah oo wejigeeda ku jira, laakiin aad uga dhab ah jirka intiisa kale. Waxay leedahay qaar naasaha taas oo, aragtidayda, ay tahay cajiib ah inay ahaato mid dabiici ah waxaana u maleynayaa inuu uqalmo inuu kujiro liiskan isaga oo u qalma, xitaa hadii akadeemiyada galmada aysan rabin inay wax abaalmarin ah siiso. Inay iyagu noo daayaan, inaan siinno waxay rabto 😉
Haddii aad raadineyso pornstar Isbaanish ah, waa inaad tixgelisaa Amarna. 24-sano jirkaan ayaa ku guuleystay abaalmarinta atariishooyinka ugu fiican ee jilicsan ee 2014, iyo sidoo kale websaydhka shaqsiyadeed ee ugu fiican. Iyadu sidoo kale waa qoraa, soo saare iyo agaasime. Kaalay, wuxuu sameeyaa wax walba oo ficil ahaan wax kasta oo uu sameeyo waxay la xiriiraan porno.
Maxaad u aragtaa inay yihiin goobta ugu fiican lulataaye? Wax nooga sheeg websaydhada aad booqato badanaa maxaa yeelay waxaan horey u ognahay in internetka ay jiraan fursado badan oo lagu raaxaysan karo qaawan oo amaan ah (iyo madadaalo).
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Wasmo iyo wasmo » Goobta Ugu Fiican
Barta hooyadeed. Immisa porn ayaa aragtay si loo qoro maqaalka ???
Ma aanan aheyn xD
Ciddii la timid maqaalkan waxaan kugula talinayaa barnaamijka filinka Netflix "Gabdhaha Kulul ee La Raadinayo", si loo arko haddii ay sii wadaan taageerida warshaddan markii ay daawadeen ka dib, bisha ugu horreysa waa lacag la'aan sidaa darteed ma jiraan wax cudurdaar ah, waxaan hubaa inaan ka tirtiri lahaa dhammaan Porn-ka goobta riix badhanka ma ka waaban doono inuu sameeyo, oo iska jir, ma noqonayo beenaale, mararka qaarkood waan arkaa, si kastaba ha noqotee kama labalabeyn doono ilbiriqsi si aan u soo afjaro warshaddan, aadna waan u kululaan lahaa.
Jefri giron dijo
Naag wasmo ah
Jawaab Jefri Giron
Alfonso Real dijo
Way cadahay inaad diiwaangelisay naftaada si aad ula timaado liistada intaa leeg. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad darajooyin ka sameyso darajooyinka iyo qiimeynta mid kasta. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa ugu sarreeya lulataaye, wax badan ayaan ku dari lahaa.
Jawaab Alfonso Real
blog darawal dijo
Ku jawaab mootada
Martin Varzal dijo
Xulitaan aad u wanaagsan, inkasta oo ay ku jiri lahayd Lisa Ann ama Esperanza Gomez
U jawaab Martin Varzal
U adeegid dijo
MAXAA LOO RABAA IN LA SOO CELIYO QISO JOOJI! WAXYAABO BADAN AYAA LEH OO LAGU DHAQANQAADO OO LAGU QAADO ADDUUNKEENA. HADII AADAN JECLAHAY ... HA ISTICMAALIN. WAAN IXTIRAAMNAA. ADIGANA Xurmee INTAAD JECELYAHAY.
Ku jawaab Servando
Magacaygu waa: sabrina. Waxaan ku jiraa shabakadan si aan uga sheekeeyo ninkan weyn ee awooda badan ee iga dhigay haweeneyda ugu farxada badan adduunka 1 - wuxuu lahaa caruur aan raadinayo waqtiga sanadka kuna guuleysto bakhtiyaanasiibka weyn ee sena sidaa darteed waxaan balan qaaday inaan ka markhaati furayo shabakado kala duwan waxtarradaas.
Qof kasta oo ka mid ah kuwan soo socda:
-Dhammaan dadku waxay rabaan inay ku taajiraan sixir cad.
-Dhammaan dadka raba inay sharraan.
- Wax walba, qofna ma rabin inuu caan noqdo.
Wax walba, qofna ma rabin farxad.
-Intaas oo dhan qofna uusan daaweyn karin cudur
-Qofkasta oo raba inuu caruur dhalo.
-Qof kasta oo ku guuleysta tartamada ama ciyaaraha nasiibka.
-Qofkasta oo raba inuu soo jiito dumarka.
-Qofkasta oo raba inuu soo jiito ragga - wax walba, qofna ma rabin in la jeclaado.
-Qof walba wuxuu rabaa inuu heshiis la galo shaydaanka.
-Qofkasta oo raba inuu noolaado waqti dheer.
-Qofkasta oo raba inuu noqdo Waliid
-Qofkasta oo raba inuu ku dhaqmo wax aan muuqan
-Persona dhamaantiis waa ciirsi la’aan ama mararka qaar sifiican uma qanciso naagta ama ninka
-Qofkasta oo raba inuu isticmaalo lacagta sixirka
La xiriir emaylkan waxaadna arki doontaa waxyaabaha soo socda:
Email: lediableexist@gmail.com ama WhatsApp: 00229 956 864
Waan jeclaa wax walba oo ku saabsan mowduucyadeeda, gaar ahaan rylei reid ugu fiican, waan ku cusbahay tan, sidoo kale waxaan haystaa isku duubnaan wanaagsan oo fiidiyowyo ah, geeso qurux badan
Qof DEGDEG AH ayaa laga codsanayaa, inuu ka shaqeeyo howlaha xafiiska ee aasaasiga ah, AQOON YAHAN AMA QAbar LA'AAN, haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah MAXAAD FILAYSAA, la xiriir HADDA taleefanka gacanta 3208420630.
Luana rodrigues dijo
Ma waxaad raadineysay ikhtiyaarro maaliyadeed oo ku saabsan iibsashada gurigaaga cusub, dhismaha, amaahda guryaha, dib-u-hagaajinta, xoojinta deynta, ujeeddooyin shaqsiyeed ama ganacsi? Ku soo dhowow mustaqbalka! Maalgelinta ayaa nala fududeeyay. Nala soo xiriir, maadaama aan ku bixinayno adeegyadeena maaliyadeed dulsaar jaban oo jaban oo ah 2% amaahda muddada dheer iyo tan dhowba Codsadeyaasha xiisaha lihi waa inay nagala soo xiriiraan habraacyada kale ee deynta lagu iibsanayo iyadoo loo marayo: ramzanhelp31@gmail.com
Ku jawaab Luana Rodrigues
Julaay C dijo
waa inaad ka taxaddartaa in websaydhkan qaarkood ay leeyihiin fayrasyo ​​eh
Jawaab Julio C
Bogga ugu fiican ee lulataaye oo dhan waa Xvideos, ma fahmin sababta ay dadku u jecel yihiin pornhub in ka badan Xvideos laakiin xaqiiqdii Xvideos waa kun jeer ka fiican.
Ku jawaab Frann09
WALAAL, WAAD UGU FIICANYAHAY, WAA WEB OO DHAQANKA KA HELI KARA MUUQAALO MUUQAAL AH HD OO WAA PRIMIUN Lakin BILAASH
Ku jawaab CASADORX
Huawei Band 2 waxay soo ceshanaysaa nuxurka jijimooyinka jirdhiska